unlocker 1.8.7 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
window ​သုံး​ဖူး​တဲ့​သူ​တိုင်း ​အ​ခု​ပုံ​မှ​ပြ​ထား​တဲ့ error ​မျိုး​ကို ​တွေ့​ဖူး​ကြ​မှာ​ပါ . ​ကျွန်​တော့် ​ကွန်​ပျူ​တာ ​စ​ပြီး​သင်​စ​တုန်း​က​ဆို​ရင် ​အ​တော်​လေး​ကို ​ဦး​နှောက်​စား​ခဲ့​ရ​တာ​ပေါ့ .. ​အ​ခု ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​ကို ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​ကျွန်​တော့်​ဆ​ရာ ​ဝင်​ကြည့်​ပါ​တယ် . ​သူ့ ​ခ​မျာ​လဲ ​တ​ပည့်​တစ်​ယောက်​ကို ​ပ​ညာ​ကုန် ​သင်​ပေး​လိုက်​မိ​လို့ . ​တ​ပည့်​က ​ဆိုင်​ခွဲ​ထွက်​ပြီး . ​သူ​နဲ့​အ​ပြိုင်​ကြဲ​က​တည်း​က ​တ​ပည့်​တွေ​ကို ​အ​တော်​လန့်​သွား​ပုံ​ပေါ်​တယ် . ​ကျွန်​တော်​က​တော့ ​ခေတ်​ပျက်​မှ ​သူ့​ဆီ​ရောက်​သွား​တာ​ပါ . ​ကျွန်​တော့်​ကို ​သူ​မေး​ပါ​တယ် . ​လ​တဲ့​လ​စာ​က ​ခြောက်​သောင်း​ထဲ​ပါ . ​မ​ပို့​မ​ပို့​လ​စာ​လေး​နဲ့​ပေါ့ . ​စ​လုပ်​က​တည်း​က ​လ​စာ​ကို ​မျှော်​လင့်​ပြီး ​လုပ်​ခဲ့​တာ​မ​ဟုတ်​တဲ့ ​အ​တွက် ​နောင်​တ​တော့ ​မ​ရ​ပါ​ဘူး . ​ရ​တဲ့​နောင်​တ​က​တော့ ​သူ ​ကွန်​ပျူ​တာ​တွေ​ကို service ​ပြင်​မယ်​ဆို​တိုင်း printer ​တွေ​ကို service ​ပြင်​မယ်​ဆို​တိုင်း၊ ​မိ​တ္တူ​ကူး​စက်​တွေ​ကို service ​ပြင်​မယ်​ဆို​တိုင်း ​ကျွန်​တော့်​ရှိ​နေ​တုန်း​ဆို ​ဟို​လို​လို ​ဒီ​လို​လို ​လုပ်​တတ်​ပါ​တယ်။ ​လုပ်​မ​ပြ​ပါ​ဘူး . ​ကျွန်​တော် ​လ​ဖက်​ရည်​သွား​သောက်​တာ​မျိုး ​အိမ်​ပြန်​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ ​ည​အ​ချိန်​ကျ​မှ ​ကုပ်​ကပ်​ပြီး​လုပ်​တာ​ပါ။ ​စ​စ​လုပ်​တုန်း​က​တော့ ​ပြ​တယ်​ဗျ။ ​ကျွန်​တော်​ကို ​အဲ့​လောက် ​သူ​လုပ်​တာ​မြင်​တာ​လေး​နဲ့ ​လုပ်​တတ်​မယ်​လို့ ​မ​ထင်​တာ​လဲ​ပါ​တာ​ပေါ့။ ​ဒီ​က ​သိ​တယ်​မ​ဟုတ်​လား ။ ​ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့ ​ပတ်​သက်​လာ​ရင် ​မူ​လီ​ပါ ​အ​ပေါက် ​ဘယ်​နှစ်​ပေါက်​ပါ​လဲ ​လိုက်​ကြည့်​နေ​တဲ့​ကောင်။ ​သူ​လုပ်​တာ​မှန်​သ​မျှ​ကို ​ကျွန်​တော်​ရ​သွား​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​က​လဲ ​ငယ်​ငယ်​က​တည်း​က ​အ​ကျင့်​ရှိ​တယ် . ​တစ်​ခါ​လေး ​မျက်​စိ​နဲ့​မြင်​တာ​နဲ့ ​အိမ်​ရောက်​ရင်​ပြန်​လုပ် ​အ​ဆင်​ကို​ပြေ​လို့ ​မ​ပြေ​လို့​က​တော့ ​မိုး​လင်း​လဲ ​ဂ​ရု​မ​စိုက်​ဘူး။ ​အ​ခု ​ဒီ Unlocker ​လေး​ကြောင့် ​တစ်​ည​လုံး ​မ​အိပ်​ခဲ့​ရ​ပုံ​လေး​ကို ​ပြန်​မြင်​ပြီး ​ပြော​ပြ​လိုက်​တာ​ပါ ။ ​အဲ့​ဒီ့​တုန်း​က ​အ​နား​မှာ​လဲ ​မေး​မြန်း​မယ့်​သူ​က ​မ​ရှိ​ဗျာ . ​သင်​တန်း​မှာ​က​လဲ ​ဒါ​တွေ​ကို ​မ​သင်​ပေး​ဘူး . ​လေ​နံ​ဓါး​ထစ်​ပဲ ​သင်​တန်း​ဆ​ရာ​တွေ​က ​စေ​တ​နာ​ပါ​ပါ​နဲ့ ​မေး​သ​မျှ​ကို ​ဖြေ​ပေး​မယ့် ​ဆ​ရာ​မျိုး​တော့ ​ကျွန်​တော့်​မ​တွေ့​သေး​ဘူး . ​မ​ဆုံ​မိ​တာ​လဲ​ပါ​မှာ​ပါ . ​ဆ​ရာ​က ​ကျွန်​တော့​သာ ​သင်​မ​ပေး​ချင်​တာ ​ကျွန်​တော်​နဲ့ ​အ​တူ​တူ​လုပ်​တဲ့ ​ကောင်​လေး ​တစ်​ယောက်​ရှိ​တယ် . ​သူ​က ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို ​သိပ်​စိတ်​မ​ဝင်​စား​ဘူး။ ​အဲ့​ကောင်​လေး​ကျ​တော့ ​သင်​ပေး​တယ်​ဗျာ ။ ​တစ်​ခါ​တစ်​ခါ ​စဉ်း​စား​မိ​တယ် ​လူ​တွေ​များ ​လို​ချင်​တဲ့​သူ​ကို​မ​ပေး​ဘဲ ​ဟင့်​အင်း​လို့ ​ခေါင်း​ခါ​နေ​တဲ့​သူ​ကို​မှ ​အ​တင်း​လည်​ပင်း​ညှစ်​ပြီး ​ယူ​ရင်​ယူ​မ​ရင်​ရင် ​နာ​မယ်​လုပ်​တာ​မျိုး​လဲ ​ရှိ​တာ​ဘဲ​လို့၊ ​ဒီ​စာ​မျိုး​ကို ​အ​ပြင်​မှာ ​ကျွန်​တော် ​ပြေ​ဖို့ ​ပါး​စပ်​က​ထွက်​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . ​ကြုံ​တုန်း​လေး ​ဘယ်​တုန်း​က​မှ ​မ​ပြော​ဖြစ်​တဲ့ ​အ​ကြောင်း​လေး​ကို ​သိ​အောင်​လို့ ​ရင်​ဖွင့်​လိုက်​တာ​ပါ . ​ဆ​ရာ​လဲ ​နား​လည်​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​ဘယ်​လို​ဘဲ​ဖြစ်​ဖြစ်​ပါ ​ဆ​ရာ​ဟာ​ဆ​ရာ​ပါ​ပဲ ...
​ကဲ​ဒါ​လေး​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို delete (or) shif + delete + enter ​ဘယ်​လို​မှ ​ဖျက်​လို့​မ​ရ​ဘဲ ​အ​ပေါ်​က error ​မျိုး​ဘဲ ​တက်​နေ​တယ် . ​ဖိုင်​က​လဲ ​တန်​ဖိုး​မ​ရှိ​ဘူး​ဆို​ရင် ​အ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​တဲ့ Unlocker ​လေး​နဲ့​သာ ​ဖျက်​လိုက်​ပါ . ​ကျွန်​တော် ​အ​ရင်​က ​ဒီ​ပို့စ်​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ခဲ့​ပြီး​သား​ပါ .
​နတ်​ဆိုး​လေး January 5, 2010 at 1:28 PM
​ကျေး​ဇူး​နော်..​ဘာ​မှ​သာ​မ​ဟုတ်​တာ..​ဒီerror ​က ​ဒု​က္ခ​ပေး​တယ်​နော်. ​ယူ​သွား​ပြီ
minnminnaung January 9, 2010 at 1:22 PM
​ကျွန်​တော့်​လို ​ကြုံ​ကြ​သူ​တွေ​ထဲ​မှာ ​ညီ​လည်း​ပါ​တာ​ကို ​သိ​ရ​တော့ ​ကိုယ်​ချင်း​စာ​မိ​ပါ​တယ်။ ​ဘာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​တောက်​မည့်​မီး​ခဲ ​တ​ရဲ​ရဲ​ဆို​သ​လို ​ထူး​ချွန်​ထက်​မြက်​သူ​ရဲ့ ​ကိုယ်​ရည်​ကိုယ်​သွေး​ဆို​တာ​ကို ​ဘယ်​သူ​က​မှ ​ဘယ်​လို​မှ ​ကြာ​ကြာ​အုပ်​ထား​နိုင်​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​ဆ​ရာ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ဆ​ရာ​ကောင်း​မ​ပီ​သ​တဲ့​ဆ​ရာ​တွေ ​သူ့​ထက်​ပို​တော်​သွား​မှာ ​မ​နာ​လို ​မ​ရှု​ဆိမ့်​တဲ့​ဆ​ရာ​တွေ ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​နေ​တာ​ကို ​ကို​ရော ​ညီ​ပါ ​ကြုံ​ကြ​ရ​တာ ​စာ​နာ​မိ​ပါ​တယ်။ ​ဘာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ဗု​ဒ္ဓ​မြေး​တွေ​အ​နေ​နဲ့ ​ဆ​ရာ​ဟာ ​ဆ​ရာ​အ​ဖြစ် ​မေ​တ္တာ​ထား​နိုင်​ဖို့​က ​အ​ဓိ​က​ပါ​ပဲ။ ​ဘယ်​သူ​တ​ရား​ပျက်​ပျက် ​ကိုယ်​မ​ပျက်​အောင်​ပေါ့။ ​ဆက်​ပြီး ​ထူး​ချွန်​ထက်​မြက်​နိုင်​ပါ​စေ....
phone win January 10, 2012 at 7:35 PM
​ကို​ညီ ​လို ​သ​ဘော​ပြည့်​ဝ​တဲ့ ​သူ​က ​ရှား​ပါ​တယ်---
​အ​ခု​လို ​ဆ​ရာ​စား​မ​ချန်​ဘဲ ​နည်း​ပ​ညာ​တွေ ​မျှေ​ဝ​သင်​ကြား​ပြ​သ​ပေး​နေ​တဲ့ --
​ကို​ညီ့ ​ဘ​ဝ ​မှာ​လည်း ​အ​ခက်​အ​ခဲ​များ​ကို ​အောင်​မြင်​စွာ​ကျော်​ဖြတ်​နိုင်​ပြီး--​သာ​ယာ​ပျော်​ရွှင်​စွာ--​အောင်​မြင်​မှု​ပန်း​တိုင်​ကို​အ ​ရောက်​လျှောက်​လှမ်း​နိုင်​ပါ​စေ​လို့--
​ဆု​တောင်း / ​မေ​တ္တာ ​ပို့​သ​လိုက်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ--။
reveal mind June 28, 2012 at 1:46 AM
reveal mind June 28, 2012 at 1:47 AM
phyu sin htet htet November 3, 2012 at 2:47 PM
​ဆ​ရာ​တစ်​ယောက်​အ​နေ​နဲ့​ရော ​အ​ကို​တစ်​ယောက်​အ​နေ​နဲ့​ဘာ ​လေး​စား​ပါ​တယ်။
phyu sin htet htet November 3, 2012 at 2:56 PM
Chit Maung February 8, 2013 at 11:05 PM
​ကျ​နော်​က​တော့ ​ကံ​ဆိုး​တာ​ပဲ​ဗျာ.....​လိင့်​တွေ ​မ​သ​မာ​ဖြစ်​သွား​တော့​မှာ ​လာ​ကြည့်​မိ​တာ ...​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​စေ​တ​နာ​ကို​တော့ ​လေး​စား​ပါ​တယ်​ဗျာ..... ​လမ်း​ကြုံ​လို့ ​ရောက်​တုန်း​ရောက်​ခိုက် ​လို​ချင်​တာ​လေး​တွေ​ကို ​ရ​ယူ​သွား​မယ်​ဆို​ပြီး​တော့ ​စဉ်း​စား​မိ​သေး... ​လိင့်​လေး​တွေ​က ​သေ​ကိန်း​နဲ့ ​ကြုံ​တွေ​တော့ ​ဘယ်​လို့​မှ ​မ​တက်​နိုင်​ပဲ ​ဒီ​အ​တိုင်း​ပြန်​သွား​ရ​တာ​ချည်း​ပဲ.... ​နောက်​တစ်​ခေါက် ​ဒီ​ဖက်​ကို ​လှည့်​ပြန်​ခဲ့​ရင်​တော့ ​လို​ချင်​တာ​လေး ​ရ​ချင်​ပါ​သေး​တယ်....​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ရယ်...
kyaw kyaw thet December 20, 2013 at 5:29 AM
ွှ့Thank you so much for your kind knowledge.